Te Hifandray Aminao Andriamanitra (Jaona 6:44)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mizo Mooré Myama Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Venda Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
“Tsy misy mahay manatona ahy raha tsy taomin’ny Ray izay naniraka ahy.”—JAONA 6:44.
NAHOANA NO MISY TSY MINO AN’IZANY? Maro amin’ny olona mino an’Andriamanitra no tsy mahatsapa ho akaiky azy. Nandeha niangona isan-kerinandro i Christina, any Irlandy, nefa hoy izy: “Tsisy zavatra fantatro momba an’Andriamanitra ankoatra ny hoe namorona ny zava-drehetra izy. Mbola tsy nahatsiaro ho akaiky azy mihitsy aho.”
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Nanao an’ity fanoharana ity i Jesosy: “Raha misy olona manana ondry zato ka nania ny iray, tsy hamela ny sivy amby sivifolo eo an-tendrombohitra ve izy ka handeha hikaroka ilay nania?” Te hilaza izy hoe ‘tsy tian’ny Rainy any an-danitra hisy ho very koa ny iray amin’ireny madinika ireny.’ (Matio 18:12-14) Raha mahatsiaro ho very àry ianao ka tsy mahita haleha intsony, dia tadidio fa tsy hahafoy anao mihitsy i Jehovah.
Sarobidy amin’Andriamanitra daholo ny tsirairay “amin’ireny madinika ireny.” Ahoana àry no ikarohany an’izay “nania”? Taominy hanatona azy izy ireo, araka ilay andinin-teny erỳ am-piandohana.
Iza ankehitriny no manatona ny olona any an-tranony na eny amin’ny toerana be olona, mba hiresaka momba an’Andriamanitra?
Diniho izay nataon’Andriamanitra fahiny. Nasainy niresaka tamin’ny tandapa etiopianina iray i Filipo, Kristianina tamin’ny taonjato voalohany, mba hanazava ny dikan’ilay faminaniana novakin’io tandapa io. (Asan’ny Apostoly 8:26-39) Nirahiny ho any amin’i Kornelio koa ny apostoly Petera. Efa nivavaka tamin’Andriamanitra io manamboninahitra romanina io sady niezaka nanompo azy. (Asan’ny Apostoly 10:1-48) Andriamanitra koa no nitarika ny apostoly Paoly sy ny namany ho any amin’ny renirano iray tany ivelan’i Filipy. Hitan’izy ireo tany i Lydia, “mpivavaka tamin’Andriamanitra”, ary “nanokatra tanteraka ny fony i Jehovah mba handraisany tsara ny teny.”—Asan’ny Apostoly 16:9-15.
Asehon’ireo tantara ireo fa raha mitady an’i Jehovah ny olona iray, dia ataony izay hahafantaran’ilay olona azy. Iza ankehitriny no manatona ny olona any an-tranony na eny amin’ny toerana be olona, mba hiresaka momba an’Andriamanitra? Maro no hamaly hoe: “Ny Vavolombelon’i Jehovah.” Mieritrereta àry hoe: ‘Sao dia ry zareo àry no ampiasain’Andriamanitra mba hitaomana ahy hanatona azy?’ Hanaiky ve ianao? Nahoana àry raha mangataka amin’Andriamanitra mba hanampiany anao? *
^ feh. 8 Raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia jereo ilay video hoe Nahoana Ianao no Tokony Hianatra Baiboly? ao amin’ny www.jw.org/mg.
Hizara Hizara Te Hifandray Aminao Izy